Wasiiradda adeegga bulshada oo ka warbixisay saffarro dalka dibaddiisaa ay u aaday. – Radio Daljir
Wasiiradda adeegga bulshada oo ka warbixisay saffarro dalka dibaddiisaa ay u aaday.
Janaayo 1, 2013 5:01 b 0
Ankara, Jan, 01- Wasiiradda adeegga bulshada DF ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kulankii ay yeesheen wadamada Jaamacadda carabta qeybtooda hormarinta waxbarashada, iyo sidoo kale kulan ay la yeelatay saraakiil ka tirsan dawladda Turkiga.
Marwo Maryan Qaasim wasiiradda adeegga bulshada iyo xubno ay horkacayso oo jooga dalka Turkiga ayaa tilmaamtay in kulankii ay uga qeyb gashay magaalada Tuunis uu ku soo dhamaaday guul iyadoona xustay in shirkaasi waxyaabihii ay uga hadashay ay ka mid ahaayeen in Soomaaliya loo furo sanduuq loogu aruuriyo dhaqaalaha si loo hormariyo waxbarashada iyo arimo ay ka mid yihiin dhaqanka.
Wasiiradda ayaa carabka ku dhuftay in ay kulan ay la yeelatay mas?uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda waxbarashada dowladda Turkiga taasoo ay ka heshay balan qaadyo ku aadan hormarinta waxbarashada dalka iyo sidii barbaarta? Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarsho lacag la?aan ah.
Wasiiradda adeegga bulshada ayaa safarkeeda dhawaan soo gabagabayn doonta waxaana la filayaa inuu ku soo dhamaado balan qaadyo mira dhala.
Maamulka degmada Matabaan oo eedeeyay hay’adda WFP.